Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in ay bilaabayaan howlgallo lagu sifeynayo Al-shabaab. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in ay bilaabayaan howlgallo lagu sifeynayo Al-shabaab.
Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in ay bilaabayaan howlgallo lagu sifeynayo Al-shabaab.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo safar shaqo ku joogo Gobolka Gedo ayaa gaaray Magaalada Beled-Xaawo,isagoo booqday Xero Ciidan oo ay Ciidamada Darawiishta Jubbaland ku leeyahiin duleedka Magaalada Beled-Xaawo,halkaas oo dhawaan ay weerar ku qaadeen Kooxda Al-Shabaab.
Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ku amaanay sida ay dhabar adayga ku dayashada mudan u muujiyeen Ciidamada qalabka sida oo maalmo ka hor iska caabiyay weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka Galmudug oo tababar u furey askar katirsan qeybta 21-aad ee X.D